[18+] Don Jon (2013) – Channel Myanmar
[18+] Don Jon (2013)
Don Jon 27 September 2013 (USA)
R 2013 1h 30min Adult, Comedy, Drama, Romance
IMDB: 6.5/10 227,221 votes
IMDb (6.5) / Rotten Tomatoes (79%)
မင်းသမီးစကားလက်ဂျိုဟန်ဆန် ၊ Julianne Moore နဲ့ မင်းသား Joseph Gordon-Levitt တို့ပါဝင်ထားပြီး 18+ ပညာပေးဇာတ်ကားပါ။
လူငယ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ အပြာကားစွဲလမ်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။
(ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲက အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေကို mention ပြီး ဒီဇာတ်ကားကို ပြလိုက်ကြပါ…:P )
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရော အပြာကားကို ဘိန်းစွဲသလို စွဲနေတဲ့သူတွေ ပေါများနေပြီလား…….
အပြာကားထဲက မင်းသမီးတွေ ဇာတ်ဆောင်တွေရဲ့ အပြင်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေကို လက်တွေ့ဘဝနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ သူတွေရောရှိလား…….
အခု Don Jon ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားက သူတို့နိုင်ငံက လူငယ်တွေမှာ အဖြစ်များနေတဲ့ ” အပြာကားစွဲတဲ့ စိတ်ရောဂါ “တစ်မျိုးကို ဟာသလေးတွေနှောပြီး ရိုက်ပြထားတာပါ
ဒီကားက စစကြည့်ချင်းမှာ 18+အခန်းတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြထားပါတယ် dialogueတွေကလဲ အရမ်းရိုင်းပါတယ်
ဒါပေမယ့် တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဇာတ်ကားကပေးချင်တဲ့ message ကို ပရိသတ်တွေဆီရောက်အောင် ဆွဲခေါ်သွားတာတွေ့ရမှာပါ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက ပေးချင်တဲ့ သဘောတရားက “လိင်ကိစ္စဟာ တစ်ယောက်ထဲဆန္ဒပြည့်ဝလို့ ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး လိင်ဆက်ဆံဖော်နဲ့ အပေးအယူမျှတ ရပါတယ်”
ကဲ ဇာတ်ကားအညွှန်းလေးကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်
ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ ဂျွန်နီဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ဆော်ကြည်ဘဲတစ်ပွေပေါ့ဗျာ အပတ်တိုင်း နိုက်ကလပ် သွားတယ် အပတ်တိုင်းလည်း နိုက်ကလပ်ကနေ ဆော်အလန်း တစ်ပွေ ရတယ် အမြဲတမ်းလည်း ကောင်မလေးအလန်းတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတယ် ဒါပေမယ့် သူ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝမရဘူး သူနဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေက တင်ပါး၊ရင်သား၊ ရုပ်ရည် ဘာမှ အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲ တစ်ခုခုလိုနေတယ် သူကြည့်နေကြ အပြာကားတွေ လောက်တောင် အဲ့ကောင်မလေးတွေက သူ့ကို စိတ်ကျေနပ်မှု မပေးနိုင်ဘူး နောက်ဆုံးမှာတော့ sexy တအားကျတဲ့ sex စကေးလည်းကြမ်းတဲ့ (barbara sugarman)Scarlett Johnson နဲ့ ကလပ်မှာတွေ့ပါတော့တယ်
ကဲ ဂျွန်နီလေးတစ်ယောက် Scarlett Johnson နဲ့တွေ့မှပဲ သူစွဲလမ်းနေတဲ့ အပြာကားကို စွန့်လွှတ်နိုင်မှာလား Scarlet Johnson ကရော ဘယ်လို sex စကေးတွေပြမှာလဲဆိုတာ ငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာပဲ ဆက်လက်ရှုစားပါလို့………..။
(Dark Side Production နှင့် Channel Myanmar မှပူးပေါင်းတင်ဆက်သည်။)
File size…(800 MB)
Translated by Triple X
Aletta Ocean Alexis Texas Amanda Perez Anne Hathaway Antoinette Kalaj Arayna Eison Arielle Reitsma Arin Babaian Becky O'Donohue Borislav Iliev Bree Olson Brie Larson Channing Tatum Cheyne Collins Craig Marks Cuba Gooding Jr. Damien Michaels Dani Daniels Devon Elena Kim Eva Mah Glenne Headly Isis Taylor Italia Ricci Jason Burnham Jenny Hendrix Jeremy Luke Johnny Ferrara Joseph Gordon-Levitt Julianne Moore Jynx Maze Kayden Kross Lindsey Broad Loanne Bishop Louise Cliffe Manuel Ferrara Mark Ashley Meagan Good Mia Malkova Misty Stone Nina Agdal Olia Voronkova Paul Ben-Victor Rizwan Manji Rob Brown Sarah Dumont Scarlett Johansson Sloane Avery Sonni Brown Stoya Sunny Lane Tanya Mityushina Tiffany Pulvino Tony Danza Tori Black
Option 1 Google Drive 800 MB Blu-Ray 720p
Option2usersdrive.com 800 MB Blu-Ray 720p
Option3filedwon.info 800 MB Blu-Ray 720p
Option4megaup.net 800 MB Blu-Ray 720p
Option5mega.nz 800 MB Blu-Ray 720p
Option6upstream.to 800 MB Blu-Ray 720p
[18+] Covet Island of Desire (2017) 2017
In The Room (2015) 18+
Empire of lust 2015 2015
[22+] A Plentiful Married Woman (2018) 2018
[18+] Moebius (2013) 2013
[18+] Guilty of Romance (2011) 2011
Live Nude Girl (2014) 18+ 2014
Confessions: The Secret Of Machiko Matsuoko(2010)
[18+]A Good Day To Have An Affair (2007)
Not Another Teen Movie (2001) 2001
[21+] All Ladies Do It (1992) 1992
[18+] Trap (2015) 2015
18+ Coming of Age (2017) 2017
21+ Horny wife cheated 2020